मोबाइल वालेट भुक्तानीमा २५ प्रतिशत वृद्धि, के यो सन्तुष्ट हुने प्रगति हो ?
कमल केसी शनिबार, १२ भदौ, २०७८
तस्वीरमा बायाँबाट क्रमशः सुवास सापकोटा, अर्भिन्द साह, पवन प्रधान र अशितोष साह
मुलुकमा डिजिटल भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि लागेको क्षेत्र हो मोबाइल वालेट । डिजिटल भुक्तानीमा वालेटहरुको प्रयासलाई पछ्याउँदै बैंकहरु र पछिल्लो समयमा व्यापक चर्चा पाएको एनसीएचएलको प्लेटफर्मले डिजिटल भुक्तानीमा व्यापकता पाएको छ ।
इसेवाले १२ वर्षअघि नै आफ्नो मोबाइलबाट नै युटिलिटिज बिल तिर्न सकिन्छ भनेर सुरु भएको डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा खल्ती, आइएमईपे, प्रभु पे, सेलपेलगायतका कम्पनीहरु बजारमा प्रभाव पार्ने गरी आए । आजको दिनमा युटिलिटी बिलसँगै धेरै किसिमका भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा यी वालेटहरुले ल्याइसकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार मोबाइल वालेटहरुले गरिरहेको भुक्तानीलाई हेर्ने हो भने वर्षदिनमा २५ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ । नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन हेर्ने हो भने अझ कम २२ प्रतिशत छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा १२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेका छन् । यो उक्त वर्षको रेकर्ड राख्दै सबैभन्दा धेरै भुक्तानी भएको महिना हो ।
यो भुक्तानी त्यसअघिको वर्ष २०७६/७७ को असार महिनाको भन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । उक्त वर्षको असारमा १० अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँको भुक्तानी भएको थियो ।
डिजिटल भुक्तानीका विभिन्न माध्यमको वृद्धिलाई हेर्ने हो भने वालेटले गरेको प्रगति मध्यमस्तरको छ । जस्तो कि कनेक्ट आइपीएसको कारोबारमा एक वर्षमा ३६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मोबाइल बैंकिङबाट भएको भुक्तानी २९१ प्रतिशत र क्युआर कोडबाट भएको भुक्तानी ५१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
डिजिटल भुक्तानीको यस परिवेशमा वालेटहरुले गरेको २५ प्रतिशत वृद्धि सन्तोषजनक हो त ? हामीले यो प्रश्न नेपालका अगुवा वालेटहरु समक्ष राखेका छौं ।
इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटाले गत वर्ष अपेक्षाअनुसार कारोबारमा वृद्धि नभएको बताउँछन् । ‘यो हामीले चाहेअनुसारको ग्रोथ होइन,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘यसभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा योभन्दा बढी वृद्धिदर थियो ।’
समग्रमा डिजिटल भुक्तानी बढे पनि वालेटको योगदान जति हुनुपर्ने त्यति नभएको उनको भनाइ छ । यो वर्ष कारोबारको सीमा र दायर बढाउने कुरा भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि सकारात्मक पक्ष भएको सापकोटा बताउँछन् ।
अहिले पनि आम उपभोक्तालाई वालेटबाट सानो परिणामको मात्र कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता रहेको सापकोटाको भनाइ छ । ‘हामी सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले त्यस मानसिकताबाट बाहिर ल्याउन गतिविधि गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
खल्तीका कोफाउन्डर अर्भिन्द साहले भने अहिलेको वृद्धिलाई त्यत्ति नराम्रो मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘मलाई लाग्छ यो पहिलाका वर्षको भन्दा धेरै होला,’ उनले भने, ‘यसमा भोलुममात्र नभएर नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन, सक्रिया ग्राहकलगायतका कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।’
वालेटबाट भएको परिणामलाई मात्र हेर्न नहुने उनको विचार छ । वालेटबाट सानो सानो रकमको भुक्तानी भएकाले ‘नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन’ महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । कनेक्ट आईपीएस जस्तो ठूलो परिणाममा वालेटमा भुक्तानी हुँदैन ।
‘भोलुमका हिसाबले कम भए पनि कारोबार नम्बर धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलुमलाई मात्र हेर्न मिल्दैन ।’ वालेटमा दर्ता हुने व्यक्ति धेरै देखिए पनि सक्रिय भनेको सयमा २० को हाराहारीमा हुन्छन् ।
साहले भने जस्तै वालेटमा सानो रकम भुक्तानी हुने र कारोबारसँख्या महत्वपूर्ण हुने भए पनि त्यसमा पनि वृद्धि देखिदैन । यो वर्ष ट्रान्जेक्सन नम्बरको वृद्धिदर २२ प्रतिशत छ । यो भुक्तानी परिणामभन्दा पनि थोरै हो ।
गत वर्षको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको असार महिनामा ट्रान्जेक्सन नम्बर १ करोड २५ लाख १५ हजार रहेको छ । त्यसअघिको वर्ष सोही महिनामा यस्तो ट्रान्जेक्सन १ करोड १ लाख ७९ हजार रहेको थियो ।
सेलपेका सीईओ पवन प्रधानले पनि अपेक्षाअनुसार कारोबारमा वृद्धि नदेखिएको बताए । कारोबार सीमा कम भएका कारण पनि कारोबारमा कमी आएको उनको भनाइ छ ।
मोबाइल बैंकिङ र कनेक्ट आईपीएसको भन्दा वालेटको कारोबार सीमा कम छ । यसका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायकले राष्ट्र बैंकमा कुरा गरेका छन् ।
‘हामीले राष्ट्र बैंकमा वालेटको कारोबार सीमा बढाउनु पर्‍यो भनेर भनेका छौं,’ सीईओ प्रधानले भने, ‘त्यो माग सम्बोधन गर्छौं भन्नु भएको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानी सीमा बढाउने र भुक्तानी सेवा प्रदायकको दायरा बढाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यस्तै मोरू डिजिटल वालेटका सीईओ अशितोष साहले पनि अपेक्षित अनुसार कारोबार वृद्धि नभएको बताए ।
‘वालेटबाट भएको कारोबारलाई सन्तोष हुने ठाउँ रहे पनि कारोबारमा भने अपेक्षाअनुसारको वृद्धि भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले अझै सहयोग गरे वालेटबाट हुने कारोबारमा वृद्धि आउने सम्भावना छ ।’
वालेटबाट युटिलिटी पेमेन्टमात्र नभएर ग्राहकले सबै कारोबार गर्न सकुन् भन्ने आफूहरूको चाहना भएको साहले बताए । राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि ढोका पनि खोलिसकेको उनको भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस: के डिजिटल बैंकले माेबाइल वालेटकाे भविष्य साँघुरो बनाउँदैछ ?
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई मिनिसो र मिसियोका स्टोरबाट सामान किन्दा १० प्रतिशत क्यासब्याक
गरिमा विकास बैंकको मोबाइल बैंकिङ तथा डेबिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई ४५ प्रतिशतसम्मको छुट
क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन जस्ता गैरकानुनी कार्यमा आईएमई पे प्रयोग नगर्न अनुरोध, गरे कारबाही हुने
फोनपे नेटवर्कबाट एक महिनामा ६७ अर्बको कारोबार
इसेवाबाट बीमा शुल्क तिर्दा एक लाख जित्ने अवसर
सेल पे मार्फत बैंक खाता लिंक गर्दा १०१ रुपैयाँको वालेट ब्यालेन्स प्राप्त गर्न सकिने